Ancelotti Oo Waraysi Uu Bixiyey Ku weeraray taageereyaasha kooxdiisa
HomeWararka MaantaAncelotti Oo Waraysi Uu Bixiyey Ku weeraray taageereyaasha kooxdiisa
Carlo Ancelotti ayaa ka hadlay ciyaartii ay kooxdiisu barbar dhaca 1-1 la gashay Villarreeal taas oo ku dhamaatay iyadoo ay Real Madrid safka hore u taagan yihiin Jesé, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo iyo Chicharito.
Ancelotti oo waraysi siiyey wargeyska AS, ayaa waxa uu kaga hadlay dareenkii taageereyaashu ka bixiyeen markii uu beddelka ku saaray Isco iyo natiijadii ciyaartaba. Waraysiga ayaa waxa uu u dhacay sidan:
Maxaad u malaynaysaa in ay kooxdaada ka khaldanaayeen?
“Ciyaartu waxay ahayd laba qaybood. Qaybtii hore si xaraarad hoosaysa ayaanu u ciyaarnay, dhinacyadana kubbado badan ayaanu ka soo dhiibtay waayo kubadda si degdeg ah umaanaan wadaynin. Isbeedelku wuxuu nagu dhacay qaybtii dambe oo aanan ka faa’iidaysanin fursadihii aanu helnay”.
Miyaad isku dhex yaacayseen markaad kubadda goolka la hor tagtaan?
“Anigu ma garanayo isku-dhexyaaca laakiin waxa run ah in aanu fursado badan luminay. Nasiib umaanaan lahayn dhamaystirka. 24 jeer ayaanu goolka tooganay, 7 kaliya ayaa goolka ku hagaagay”.
Ka warran Villarreal?
“Waa koox si aad ah u habaysan, qaab ciyaareed u gaar ah ayay leeyihiin mar kastana sidan oo kale ayay sameeeyaan. Waxay ciyaartaa kubbad tayo sare leh oo habaysan”
Maskixiyan iyo jidh ahaan midkeed hoosayseen?
“Haddii laga hadlo jidhka qaybtii dambe ayaanu is dhinnay, waxa aan odhan karaa mushkilad ayaa na haysatay”.
Maxaad u beddeshay Isco?
“Tababare ayaa garoonka jooga oo isbeddelka sameeeya sababtoo ah waxa uu rumaysan yahay in sidaasi kooxda u wanaagsan tahay. Haddii aanay taageereyaashu ila fahmin waan ka xumahay, laakiin waxa aan go’aanka u sameeyey si kooxdu u dheelli-tiranto.”
Kroos wuxuu ku keliyeystay dhexda, waayo?
“Lucas ayaa isku dayey in uu ka garab shaqeeyo Kroos. Bilowgii difaacyaga ayaa furnaa laakiin qaybtii dambe kaliya waxay naga heleen laba fursadood. Intaa kadib in aanu culayska ayaanu ku kordhinay, laakiin Villarreal kubadda ayay si fiican u ciyaaraysay”
Barcelona waxay kaa hoosaysaa laba dhibcood, miyaanu werwer kugu haynin qaab ciyaareedkeedu?
“Waxay ila tahay in kooxdu horumar samaynayo. Laba dhibcood ayaanu luminay laakiin horyaalka illaa ciyaarta ugu dambaysa lama go’aamin karo. Laba dhibcood oo aad dheer tahay waxba faa’iido ma leh, waase in aanu degenaano waayo ciyaar adag ayaa nagu soo waajahan.”
Ma u malaynaysaa in aad diciifteen?
“Maanaan diciifin, kaliya nasiibka ayaa naga hiiliyey.”
Inter Oo U Sheegtay Tottenham Inay Roberto Soldado Ku Darto £10m Haddii Ay Doonayso Fredy Guarin
Karim Benzema ‘meeli ugama banaana’ xulka qaranka France: ‘Ra’iisal Wasaare Manuel Valls
Liverpool Oo Dhirbaaxo Kulul Ku Dhufatay Chelsea Iyo Damaashaadkii Klopp Ee Shiiqiyey Conte